Mentgha: Nlekọta Nnyocha, Nyocha Mmetụta, na Mkpọpụta Maka Ọchụchọ na Mentions Social Media | Martech Zone
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ntanetị ịntanetị maka nyocha aha na nyocha mmetụta na-elekwasị anya na mgbasa ozi mmekọrịta, Gha bu uzo zuru ezu iji nyochaa nlekota ma obu ihe nile banyere akara gi na ntaneti.
A na-enyocha ma nyochaa ihe onwunwe ọ bụla dijitalụ nke jikọtara na saịtị gị ma ọ bụ kpọtụrụ aha gị, ngwaahịa, hashtag, ma ọ bụ aha onye ọrụ…. Na ụdị Brandmentions na-enyekwa mata, nsuso, yana mmetụta nyocha. Gha enyere azụmahịa aka:
Wulite Mmekọrịta Mmekọ - Chọpụta ma soro ndị ahịa gị na ndị isi nsogbu dị na niche gị nke ga - enye gị nnukwu akara ngosi & nghọta dị ukwuu banyere ahịa gị.
Nweta ma jigide ndị ahịa - Mara ezigbo mkpa ndị ahịa gị ma mepụta ngwaahịa ga-egbo mkpa na ọchịchọ ha. BrandMentions na-agwa gị ebe ịkwalite ngwaahịa gị ma chọta ndị ahịa ọhụrụ.
Jikwaa Brandma Aha - Site na ịmara onye na-ekwu maka gị na ihe ọ bụla, ị ga - enweta ike ịghọta ma kpuchido aha gị na ahịa asọmpi siri ike.
BrandMentions abụrụla ngwa ọrụ dị oke mkpa iji chọpụta ihe ịga nke ọma nke mkpọsa ahịa anyị. Anyị na-agbasi mbọ ike ịmara banyere akara anyị n'ịntanetị, ọ nweghịkwa ngwaọrụ ọzọ anyị nwalere nwere ọtụtụ aha dị mkpa dị ka BrandMentions. Anyị na-akwado ya!
Mark Traphagen, Onye isi oche Director Brand Evangelism na Stone Temple
Yana web saịtị, Gha nyochaa ma weghara nkwupụta mgbasa ozi mmekọrịta na LinkedIn, Reddit, Facebook, Foursquare, Twitter, Pinterest, na Youtube.
Atụmatụ njirimara gụnyere:
Ntanetị na nlekota oru - Nyochaa ihe niile a na-ekwu maka ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ngwaahịa gị na ọwa niile dị mkpa, ọ bụrụ web ma ọ bụ mgbasa ozi mmekọrịta. Mdị Mentions na-eme ka ị mara ihe niile dị mkpa n'ahịa gị yana ihe ọ bụla ejikọtara na ụlọ ọrụ gị, na-enye ezigbo oge ịdọ aka ná ntị na igbe mbata gị.
Asọmpi nnyocha Inyocha usoro nke ndị asọmpi gị abụghị naanị nhọrọ. Ọ bụ akụkụ dị mkpa nke usoro uto gị. Ka ị na - achọpụta ihe gbasara azụmahịa gị na ndị na - asọmpi gị, ị ga - enwe ike ịmụ ihe, imeghari, ma mecha mee nke ọma. Nwere ike ugbu a iledo na asọmpi si n'akụkụ dị iche iche na nwere a doro anya echiche nke ebe mpi n'ezie guzo.
Real-Oge ificationsma Ọkwa - Chọpụta onye kpọtụrụ aha gị na ebe oge ha mere. BrandMentions na-enye gị ezigbo oge everyma Ọkwa oge ọ bụla ị nwetara ọhụrụ kwuru ma ọ bụ njikọ. Now nwere ugbu a ohere niile data dị oke egwu metụtara akara gị na ntanetị na ntanetị.
Akaụntụ M Akaụntụ
M na a na-eji Gha ọnwa ole na ole ugbu a ma ọ dị mma. Ikike inyocha ihe niile n’elu otu ikpo okwu bara ezigbo uru. O were nkịtị na nkeji ole na ole iji melite akaụntụ ahụ ma tinye isiokwu ụfọdụ (yana saịtị m) iji gee ntị.
Email a na-enweta kwa ụbọchị bụ naanị ihe m kwesịrị inyocha ma zaghachi na nke ọ bụla n'ime saịtị m kwuru site na aha ma ọ bụ site na URL:
Kemgbe ịmalite iji Gha, M:
Achọpụtara m akwụkwọ ọzọ na-ezuru ọdịnaya m. Ha ewepụla ọdịnaya ahụ ma anaghị ebipụtakwa ya ọzọ.
Achọpụtara ụfọdụ ahịa ndị na-egbu egbu Ndi na-ekerita ihe ndi m na-agbaso ma o bu gosiputara ekele m.
Chọpụtara ụfọdụ ebe nrụọrụ weebụ nke ndị ọkà okwu ndị ọzọ gbara ajụjụ ọnụ ma ọ bụ na-ede na - na-enye m ohere ịnweta mgbasa ozi ọzọ.
Enweghị m nchegbu gbasara nyocha mmetụta ebe ọ bụ na mbipụta m anaghị ede ọrụ ma ọ bụ ihe ọ bụla na-ese okwu. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-ere ngwaahịa ma ọ bụ aka ọrụ, nghọta ma ọ bụrụ na mmetụta banyere akara gị dị mma ma ọ bụ na-adịghị mma dị oke mkpa na ọganiihu azụmaahịa gị.
Malite Ọnwụnwa Brandkwụ Freegwọ
Tags: backlink nlekota orunlekota oruahanlekota asọmpiasọmpi ọgụgụ isiFacebookNlekota oru Facebookakụkụ anọngbanwe anọ n ’akụkụ anọhashtag nlekotaisiokwu nlekotaLinkedInnlekota orugwa alertiPinterestnleba anya pinterestRedditreddit nlekotanjikwa ahanlekota orummetụtaechiche nyochaelekọta mmadụ mediamgbasa ozi mgbasa ozinlekota oru mgbasa oziTwitternlekota twitteryoutubeNlekota oru YouTube